ပြည်ပထုတ်ကုန်ထက် ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုကို ပိုအားပေးသွားမည်ဟု စကစ ဆို…. – Alanzayar
ပြည်ပထုတ်ကုန်ထက် ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုကို ပိုအားပေးသွားမည်ဟု စကစ ဆို….
ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့်ဆက်ဆံရေး ရန်သူမရှိ၊မိတ်ဆွေသာရှိ မူဝါဒ ကျင့်သုံး
ပြည်ပနိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံမှုတွင် အကယ်၍ ရန်သူဖြစ်နေရင်တောင် မိတ်ဆွေဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်မည်ဟု နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက နစကသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့၏ (၁၂)ကြိမ်မြောက် ယနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောသည်။
မြန်မာက ကျင့်သုံးနေသည့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးက ရန်သူမရှိ၊မိတ်ဆွေသာရှိသည်ဟုလည်း ၎င်းကထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့သည် ပြည်ပအကူအညီလိုအပ်သည်က မှန်သော်လည်း တိုင်းပြည်၏အင်အား သည် ပြည်တွင်းမှာသာရှိသည်ကို
ယုံကြည်ထားသည့်အတွက် ပြည်တွင်းအားကောင်းမွန်စေရန် နစကအနေဖြင့် ပြည်တွင်းစီးပွားရေးကို မြှင့်တင်သွားမည်ဟုပါ ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုကို အားမပေးဘဲ ပြည်ပသွင်းကုန်တင်သွင်းမှုအား အားပေးခဲ့၍ လူမှုစီးပွားအားနည်းချက်များ ရှိခဲ့သည့်အတွက် ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုကိုအားပေးမည်ဟုလည်း ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ယနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောဆိုခဲ့သေးသည်။
ဆက်၍ တိုင်းရင်းသားပြည်သူများပါဝင်သည့် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးစွမ်းအားကို တည်ဆောက်သွားရန်လည်း ရှိကြောင်းပါ ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားသည်။
ပွညျပထုတျကုနျထကျ ပွညျတှငျးထုတျလုပျမှုကို ပိုအားပေးသှားမညျဟု စကစ ဆို….
ပွညျပနိုငျငြံမားနှငျ့ဆကျဆံရေး ရနျသူမရှိ၊မိတျဆှသောရှိ မူဝါဒ ကငျြ့သုံး
ပွညျပနိုငျငြံမားနှငျ့ ဆကျဆံမှုတှငျ အကယျ၍ ရနျသူဖွဈနရေငျတောငျ မိတျဆှဖွေဈအောငျ ဆောငျရှကျမညျဟု နိုငျငံခွားဆကျဆံရေးနှငျ့ ပတျသတျပွီး ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျးက နစကသတငျးထုတျပွနျရေးအဖှဲ့၏ (၁၂)ကွိမျမွောကျ ယနေ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲတှငျပွောသညျ။
မွနျမာက ကငျြ့သုံးနသေညျ့ နိုငျငံတကာဆကျဆံရေးက ရနျသူမရှိ၊မိတျဆှသောရှိသညျဟုလညျး ၎င်းငျးကထညျ့သှငျးပွောဆိုခဲ့သညျ ပွညျပအကူအညီလိုအပျသညျက မှနျသျောလညျး တိုငျးပွညျ၏အငျအား သညျ ပွညျတှငျးမှာသာရှိသညျကို
ယုံကွညျထားသညျ့အတှကျ ပွညျတှငျးအားကောငျးမှနျစရေနျ နစကအနဖွေငျ့ ပွညျတှငျးစီးပှားရေးကို မှငျ့တငျသှားမညျဟုပါ ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျးက ဆကျလကျပွောဆိုခဲ့သညျ။
ထို့အပွငျ ပွညျတှငျးထုတျလုပျမှုကို အားမပေးဘဲ ပွညျပသှငျးကုနျတငျသှငျးမှုအား အားပေးခဲ့၍ လူမှုစီးပှားအားနညျးခကျွမြား ရှိခဲ့သညျ့အတှကျ ပွညျတှငျးထုတျလုပျမှုကိုအားပေးမညျဟုလညျး ဗိုလျခြုပျဇျောမငျးထှနျးက ယနေ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲတှငျ ပွောဆိုခဲ့သေးသညျ။
ဆကျ၍ တိုငျးရငျးသားပွညျသူမြားပါဝငျသညျ့ နိုငျငံတျောကာကှယျရေးစှမျးအားကို တညျဆောကျသှားရနျလညျး ရှိကွောငျးပါ ထညျ့သှငျးပွောဆိုသှားသညျ။
Previous Article တချို့လူတွေရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ သစ္စာတရားက တည်မြဲလွန်းလို့ ကို ကံတရားကြီးကတောင် သဝန်တိုမိသွားတယ်ထင်ပါရဲ့
Next Article မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော စစ်တပ်ကို အမေရိကန်အစိုးရ ကြေညာပြီ